Antony 6 Nahoana ianao no tsy afa-po mihitsy amin'ny fiainana (+ Fomba ahatongavana) - An-Tsaina
Antony 6 Nahoana ianao no tsy afa-po mihitsy amin'ny fiainana (+ Fomba ahatongavana)
Ny olona dia manao asa mahatalanjona amin'ny firesahana ny tenany ho an'ny fahasambarany manokana. Toa izany fa raha vao mahatratra ireo zavatra tadiavintsika isika dia mifindra mankany amin'ny zavatra manaraka eny akaiky eny.
Ity fikatsahana tsy tapaka ny zava-baovao, traikefa vaovao, toe-javatra vaovao ity dia fanodinam-bokatra tsy manam-petra izay mandreraka antsika mandra-pahitantsika ny fahasambarana sy fifaliana nomen'ireto zavatra ireto antsika taloha.
Ary tsy manampy an'izany sarotra ny fiainana . Misy foana ny zavatra mahatsiravina mitranga eo amin'izao tontolo izao hampahatsiahy antsika fa tokony hankasitraka bebe kokoa isika, hanao bebe kokoa, hikatsaka bebe kokoa, hiezaka hahita zavatra tsara kokoa amin'ity rehetra ity.
Fa kosa, mila mahatakatra ny antony tsy nahafa-po antsika isika ary miasa manitsy izany olana izany.
Andao jerena ireo antony lehibe kokoa mahatonga anao 'tsy mahazo fahafaham-po' rehefa mihira ny Rolling Stones.
1. Tsy ankasitrahanao izay efa anananao.
Ny fankasitrahana dia teboka firesahana mahazatra eo amin'ny sehatry ny fanampiana-tena sy ny fahasalamana ara-tsaina. Na aiza na aiza no itodihanao azy dia resaka 'fankasitrahana, fankasitrahana, fankasitrahana!'
Na izany aza, hafahafa ny toa olona vitsivitsy toa tena manazava ny tombotsoan'ny fankasitrahana sy ny fomba ahafahany mamolavola ny fiainanao.
Andao ataontsika izao.
Ny fankasitrahana dia mikasika ny fanovana ny fahitanao azy. Ny olona mifantoka amin'ny zavatra rehetra tsy ananany sy izay tadiaviny dia mamorona fifanolanana ao anatiny. Lazain'izy ireo tsy tapaka amin'ny tenany fa tsy ampy izy ireo, fa mila mihoatra, mila miasa mafy kokoa. Tsy fitantarana mahasalama izany hamerenana miverimberina ao an-tsainao.
Ny fankasitrahana dia ny fanapahana an'io fitantarana io. Raha tokony hifantoka amin'ny zavatra rehetra tsy anananao ianao dia mifantoka amin'ny zavatra anananao, na dia tsy be aza izany. Na dia tsy tsara indrindra aza ny fiainanao, na efa nandalo zavatra nahatsiravina ianao. Isan'andro isika misintona fofonaina dia fanomezana ary zavatra tokony hankasitrahana satria maro ny olona tsy manana izany tombony izany.
Mora kokoa ny fahafaham-po amin'ny tenanao sy ny fiainanao rehefa mifantoka amin'izay anananao ianao. Manala ny tenanao hiala amin'ny fitoeran-tongotr'ilay 'mahazo bebe kokoa' ianao sy ny fanahiana amin'ny ho avy.
miandry bandy tsy mahalala izay tadiaviny
Raha ny tena izy dia mety tsy hisy rahampitso ny fanananao rehetra anio. Izay ihany ny fomba fandehan'ny fiainana indraindray.
2. Tsy mihantsy ny tenanao ianao.
Betsaka ny olona mametra ny tenany amin'ny alàlan'ny tahotra sy fitaintainany manokana. Inona no tena tadiavinao? Manaraka an'io ve ianao? Sa matahotra ny hanenjika azy io ianao?
Te handefa an'io orinasa io ve ianao? Ahoana raha tsy mahomby? Ahoana raha mandany ny zava-drehetra ianao ary mampiditra trosa anao? Ahoana raha tsy mandeha ny n'inona n'inona?
Te hanangana fianakaviana be fitiavana ve ianao? Mametraka ny tenanao any ivelany ve ianao? Mamela ny tenanao ho marefo sy miatrika ireo loza mety hitranga rehefa mora tohina amin'ny olona vaovao ianao?
Raha tokony hametraka ny angovo amin'ireo zavatra tena tadiavintsika isika dia manelingelina ny tenantsika amin'ny tanjona ambanin'ny tany izay tsy manery ny fetrantsika manokana.
Ahoana no fahafaham-po anao amin'ny fiainanao raha tsy mifanaraka amin'izay mahatonga ny fanahinao hihira ianao?
inona no nahafaty an'i chyna
Raha te ho afa-po amin'ny fiainana ianao dia mila manenjika ireo zavatra miantso anao.
“Fa tohizo,” Reko miteny ianao, “Tsy nilaza tamiko fotsiny ianao mba ho feno fankasitrahana amin'izay ananako fa tsy hanenjika bebe kokoa?”
Eny, saingy misy fahasamihafana eo amin'ny fanamby ny tena sy ny tsy fankasitrahana ny zavatra anananao.
Raha ny tena izy, ny fametrahana fanamby ho anao sy ny fampiharana ny fankasitrahana dia tsy mifanentana - afaka manao roa miaraka ianao.
Izany rehetra izany dia ny fitadiavana medium antonony eo amin'ny fiainana tsara ao anatin'ny faritra mampionona anao izay mety tsy hanohizanao izay tena mahasambatra anao, ary manindry mafy ny tenanao ka tsy mankafy ny soa azo avy amin'ny ezaka ataonao.
Tsy misy fanamby matetika midika hoe tsy fahafaham-po. Toy izany koa, ny fifantohana be loatra amin'ny fanamby dia mamela toerana kely ho an'ny fahafaham-po.
3. Tsy miaina amin'izao fotoana izao ianao.
Tena tsara lavitra ny raharaha teo aloha! Eny, angamba nisy izy ireo, angamba tsy izany. Hihatsara kokoa ny raharaha amin'ny ho avy! Angamba, angamba.
Tsy mandeha amin'ny fomba kasaintsika foana ny fiainana. Indraindray tsy afaka maneho ny nofinay amin'ny fomba nantenainay isika. Na angamba ny fiainana fotsiny dia nanipy anao curveball goavambe, ary ankehitriny ianao dia tsy maintsy miatrika ny fahalavoana zavatra mahatsiravina. Mitranga ny aretina, maty ny olona, ​​be ny voina. Ary tsy misy amintsika manokana manokana hisorohana an'izany loza izany. Izy rehetra dia ampahany ara-dalàna amin'ny traikefan'ny zanak'olombelona avokoa.
Ara-dalàna ihany koa ny mangetaheta fotoana izay mety nihatsara ny toe-javatra, raha toa izao tontolo izao dia mety ho toerana mamiratra kokoa, na talohan'ny nitrangan'izany zavatra mampalahelo izany. Ny olana dia tsy manana an'io rendrarendra io isika. Mandany fotoana be fotsiny izany raha maniry ho avy izay mbola tsy ananantsika.
Ny fahafaham-po amin'ny fiainana dia tsy hita raha tsy amin'izao fotoana izao, noho izany dia mila izany ianao velona amin'izao fotoana izao hahatsapa ho afa-po.
Tsy manao an'izany ianao raha maniry fatratra lasa izay lasa izao na ho avy izay mety tsy ho avy mihitsy. Avereno ny sainao amin'izao fotoana izao rehefa mahita ianao manonofy momba ny ho avy na tsy mahita ny lasa.
Ahoana no hanatsaranao ny ankehitriny? Ahoana no hahitanao fahasambarana amin'izao fotoana izao, dieny izao? Ireo no fanontaniana tokony hapetrakao.
4. Tsy manana tanjona na faniriana ianao.
Tsapanao ve ny fahasarotan'ny fahafaham-po amin'ny fiainana rehefa tsy fantatrao akory izay tianao amin'ny fiainana?
Catch-22 io. Amin'ny lafiny iray, te-hahita fahafaham-po amin'ny fiainanao ianao. Etsy ankilany, tsy fantatrao izay tena hahatonga anao ho afa-po. Aiza no manomboka? Inona no ataonao? Ahoana no ahalalanao izay tokony hatao?
Te hahafantatra ny tsiambaratelo? Ny tsiambaratelo tena miafina?
Tsy maninona izay ataonao. Ny zava-dehibe dia ny tsy hisiananao manontany tena intsony, tsy misaina intsony ary manomboka manao zavatra.
Afaka mandany taona maro manontany tena sy misaintsaina ianao, ary tsy hanana zavatra aseho mihitsy ianao amin'izany fotoana lany izany. Ampitahao amin'ny olona izay mirotsaka an-tsehatra amin'ny asa ary manomboka mihetsika. Ho tonga amin'ny toerana alehany haingana kokoa izy ireo.
Fomba iray mora ahitanao ireo zavatra izay hahatanteraka anao amin'ny fiainana ny mivoaka sy manao zavatra. Ireo traikefa ireo dia mampianatra anao ny zavatra tianao, izay tsy tianao, ary hampiharihary anao amin'ny fotoana mety tsy tsapanao. Izy io koa dia ahitana olona hafa izay mety hisy fiantraikany be aminao na mety hanokatra varavarana ho anao.
ahoana no hialanao amin'ny famadihana
“Fa ahoana kosa raha diso ny fanapahan-kevitra raisiko !?”
Ianao dia ho. Isika rehetra dia manao, na ho ela na ho haingana. Ekeo fa tsy azo ihodivirana. Rehefa mitranga izany dia mankasitraka ny traikefa ary mandrosoa amin'ny zavatra manaraka. Sarotra izany araka ny tokony ho izy.
Ny fiainana tsy mandeha foana araka ny itiavantsika azy, fa afaka mitodika any amin'ny lalana ankapobeny izay eritreretintsika fa mety te hiafara. Ary iza no mahalala, mety hahita fahafaham-po ianao amin'ny toerana lavitra sasany izay tsy noheverinao ho mety aminao mihitsy. Hafahafa ny fiainana toy izany indraindray.
5. Tsy vitanao ny manomboka.
Ny fahafaham-po matetika dia avy amin'ny fahitana tetikasa na tanjona hatramin'ny farany. Saingy misy olona manana olana amin'ny famitana ny zavatra natombony.
Fa kosa, mitsambikimbikina avy amin'ny zavatra iray ho amin'ny iray hafa izy ireo, manao bits kely etsy sy eroa, misosa amin'ny hetsika na sehatry ny asa hafa fa tsy mifikitra amin'ny zavatra iray mandritra ny fotoana maharitra.
Azonao atao ny miantso azy io hoe 'syndrome mamiratra zavatra' satria raha vao manomboka zavatra iray ity olona ity dia avadika zavatra hafa heverin'izy ireo ho tsara sy mahafinaritra kokoa noho ny iray ananan'izy ireo ny lohany. Maniry hatrany ny zavatra mamiratra manaraka izy ireo, ary mino fa io no hitondra fahafaham-po ho azy ireo.
Ny zavatra azon'izy ireo dia ny antontam-pikatsoana tetikasa efa tapitra vita eo am-piandrasana azy ireo.
Ka rehefa apetrakao ao an-tsainao ny zavatra iray, dia mizaha tena. Mandroboka ao anatin'io zavatra io ary andramo mandritra ny fotoana fohy. Hizaha hatramin'ny farany io dia hahatsapa ho tsara kokoa ianao amin'izany.
Sahala amin'ny famakiana boky antsasaky ny boky alohan'ny manipy azy io ary manomboka iray hafa. Tsy ho afa-po mihitsy ianao raha tsy fantatrao ny niafaran'ilay tantara. Mandrosoa hatramin'ny farany, avadiho amina tetik'asa ny pejy farany, atsofohy ao anaty hazavan'ny hafanana avy amin'ny famitana zavatra.
manao sonia fa raisin'ny olon-tianao ianao
6. Miaina ivelan'ny anananao ianao.
Efa mba naheno fehezan-teny hoe: 'Fampandehanan'ny fiainana' ve ianao? Ny fiankinan-doha amin'ny fomba fiainana dia teny ampiasaina hilazana ny fitomboan'ny fahazarana mandany hifanaraka amin'ny karama ambony.
Izany hoe rehefa mahazo io fampiroboroboana goavana io ianao na farany mahazo io asa tsara kokoa io dia mampitombo ny fandanianao vola satria he! Ankehitriny dia azonao atao izany! Io koa dia mitaky ny fandaniam-bola amin'ny ankapobeny amin'ny zavatra andavanandro satria manana vola miditra lavitra ianao. Ny olana dia mety hanelingelina ny fiainanao izany ary hametraka anao any aoriana.
Ny olana hafa amin'ny fiainana ivelan'ny vola anananao dia ny fampiasana famatsiam-bola hahazoana ireo zavatra tadiavinao. Mety hahafinaritra ny fiara vaovao. Tsy dia lafo loatra ny fananana 30 000 $ aminy. Izany dia fanoloran-tena mandritra ny taona maro mba hiantohana ny tsy maintsy ahatongavanao amin'ny toe-javatra hahafahana mandoa ny fandoavanao, raha tsy izany ianao dia mety hamoy ny fiara sy ny fatiantoka.
Teny hafa ampiasaina hamaritana an'io karazan-javatra io dia ny 'fonosana volamena.' Teny ampiasaina matetika hamaritana ireo olona niova tamin'ny asa ambany na fampianarana ambany ho lasa karama be karama. Mivoaka izy ireo ary mividy fiara manja, trano mahafinaritra, akanjo vaovao, ary ankehitriny dia tsy maintsy mitazona izany asa izany izy ireo ary manana fidiram-bola be hitazonana azy rehetra. Tsy manan-tsafidy intsony izy ireo handroboka fotsiny an'io toe-javatra io raha tsy tadiavin'izy ireo satria voafonan'ny andraikitra ara-bola izy ireo.
Somary sarotra ny fahafaham-po amin'ny fiainanao rehefa manandrana mihazona ny takelaka rehetra ianao mba tsy hianjera manodidina anao.
Ny vahaolana tsara indrindra amin'izany dia ny fampivelarana ny fahazarana vola tsara, ny fampivoarana teti-bola (na dia fototra iray aza), ary miaina ambanin'ny volanao.
Tehirizo ny vola fanampiana $ 1000 raha sanatria ka miakatra ny heaterinao, na simba ny fiaranao. Miezaha mitahiry farafaharatsiny 20% amin'ny karamanao. Mihinana kely kokoa. Mianara mahandro, ary afaka manangona vola be ianao. Na ho ela na ho haingana dia hisy ny fiainana, ary mila izany alim-pandihizana izany ianao.
Mbola tsy azonao antoka hoe maninona ianao no tsy afa-po amin'ny fiainana? Te-ho tonga ve ianao? Miresaha amin'ny mpanolotsaina iray androany izay afaka mitarika anao mandritra ilay fizotrany. Tsindrio fotsiny eto raha hifandray amin'ny iray.
Ahoana ny fankasitrahana ny zavatra anananao: 10 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
Ahoana ny fomba hananana fahafaham-po amin'izay anananao eo amin'ny fiainana: 5 Tsy misy toro-hevitra Bullsh * t!
14 Tsy misy Bullsh * t Antony tsy ahafahan'ny vola mividy fahasambarana
Ny maha-zava-dehibe ny fametrahana tanjona: 20 ny antony tsy maintsy hametrahana tanjona
ahoana no ahalalana ankizivavy tena tia anao